Snn Nepal स्वास्थ्यकर्मी कुट्नेहरु नेपाली राजनीतिकै प्रोडक्ट हुन्, कसलाई दोष दिनू ? – Snn Nepal
स्वास्थ्यकर्मी कुट्नेहरु नेपाली राजनीतिकै प्रोडक्ट हुन्, कसलाई दोष दिनू ?
बाँकेको नेपालगन्ज स्थित भेरी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि विहीबार राति गुण्डागर्दी शैलीमा आक्रमण भयो । आक्रमणमा परी ४ जना नर्सिङ स्टाफ र एक जना चिकित्सक घाइते भए । कोरोना कहरमा अग्रभागमा खटिएर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीमाथि यसरी आक्रमण भयो कि केही डाक्टर र नर्सले दुई तलामाथिको झ्यालबाट हाम फालेर ज्यान जोगाए । कोही शौचलयमा लुकेर बाँचे । केहीलाई लगाएको पिपिइसमेत निकालेर घाँटी अठ्याउन भ्याए । घाइते बनाए ।
यो घटनाको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । विश्वब्यापी यस कोरोना महामारीमा जिउ र ज्यानलाई मृत्युको अचानोमा राखेर काम गर्ने यी स्वास्थ्यकर्मीको हौसला टुटाउने गरी जुन घटना भएको छ, यो मानवतामाथिको चरम क्रुरता हो । घाइते स्वास्थ्यकर्मीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना ।
त्यसैको विरोधमा अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरु ‘के स्वास्थ्यकर्मीले सधैँ कुटाई नै खाने हो ?’ ‘नो सेक्युरिटी, नो वर्क’ जस्ता नारा लगाउँदै आन्दोलित भएका छन्। । चिकित्सकले काम नगर्दाको असर तिनै विरामी जो मृत्युसंग लडिरहेका छन्, उनैहरुले भोग्नु पर्ने बाध्यता छ ।
मिडियामा आए अनुसार यो घटना त्यसै सामान्य ब्यक्तिले नघटाएर राजनैतिक संरक्षणमा भएको प्रमाणित भएको छ । मानबहादुर रावत एमालेका कार्यकर्ता हुन्। उनी अहिले दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं ३का इन्चार्ज तथा लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका सदस्य पनि छन्।उनी ओली निकट मानिन्छन् र गृह जिल्ला दाङकै प्रदेश मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका विश्वासिला पात्र मानिन्छन्।
पार्टीको नवौ महाधिवेशन चलिरहेका बेला पार्टीकै एक जना महिला कार्यकर्ताले आफूमाथि जवर्जस्ती करणी गरेको आरोप मान बहादुरमाथिलगाएकी थिइन् भन्ने अहिले मिडियामा छ्यापछ्याप्ती छ । जनप्रतिनिधिलाई होच्याउने र महिला कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि अभद्र व्यवहार गरेपछि उनकै पार्टीका कार्यकर्ताले कारबाहीको माग गर्दै पार्टीमा निवेदन दिएका थिए।‘पटक पटक उनको चरित्रमाथि प्रश्नहरू उठिसकेका छन्। बलात्कार, दुर्व्यवहारजस्ता आरोपहरू लाग्दै आएका छन् तर पनि पार्टीकै ठूला मान्छेहरूले गर्दा मान बहादुरले राजनैतिक संरक्षण पाइरहेका छन् ।
कोरोना कहरमा नेपाली जनता बचाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै माखो मार्न नसकि आलोचित भइरहेका बेला उनैका दायाँ हात मानिने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलका विश्वास पात्र मानबहादुर रावतले स्वास्थ्यकर्मीमाथि गुण्डागर्दी शैलीमा आक्रमण गरेर जुन बहादुरी देखाए त्यसले प्रधानमन्त्री ओलीको संरक्षणमा कस्ता-कस्ता मानिस साथमा रहेछन् भन्ने थप पुष्टि गरेको छ ।
७० करोड भ्रष्टाचारका नाइके गोकुल बास्कोटा, अपहरण विभागको प्रमुख तथा डन महेश बस्नेत, नेपालका बन जंगल सखाप पार्ने बनमन्त्री प्रेम आले, मेडिकल माफिया दुर्गा प्रसाइँ, निकै छुद्र र तुच्छ बोली बोलेर अरुमाथि जाइलाग्ने सूर्य थापाजस्ता व्यक्तिलाई काखी च्यापेर सत्ता उन्मादमा रमाइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जिल्ला-जिल्लामा पनि कस्ता गुण्डा र चुुल्ठेमुन्ठे पालेर बसेका रहेछन् भन्ने कुरा भेरी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि विहीबार राति भएको आक्रमणले पुष्टि गरेको छ ।
भागेर ज्यान बचाउन खोज्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत समातेर कुनै मानवता नराखी आक्रमण गर्ने ती मुख्य व्यक्ति मान बहादुरले ‘म मुख्यमन्त्रीको नजिकको मान्छे हुँ, प्रधानमन्त्रीसंग पनि मेरो राम्रो सम्बन्ध छ, मेरा ठुलाठुला मान्छे छन्’ भन्दै नर्सलाई मरणसन्न हुने गरी कुटेछन् । मुख्यमन्त्रीका नजिकका मानिने यस्ता मान बहादुरजस्ता कार्यकताले भेरीमा मात्र होइन देशभर आतंक मच्चाईरहेको बेलाबेलामा हुने यस्तै घटनाले पुष्टि गरेको छ । यस घटनामा पनि सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको प्रष्ट छ ।
विना कारण त्यसरी अस्पतालमाथि ढुंगामुढा गर्ने, चिकित्सकको ज्यान लिन खोज्ने ती मान बहादुर को हुन् ? के सत्ताको आडमा यस्तो हर्कत गर्न लोकतन्त्रमा छुट छ ? हुन त त्यही एमालेबाट राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले देशको मुल कानुन ‘नेपालको संविधान २०७२’ माथि यसैगरि हमला गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रको नाममा दुईजना मिलेर संविधानमाथि बलात्कार गर्ने, च्यात्ने र चिरहरण गर्ने काम भइरहेको छ भने उनका अन्ध कार्यकर्ता मान बहादुर चिकित्सकमाथि जाइ नलागेर के गरेर बसून् ? नेतृत्वबाट नै यही सिकिरहेका छन् कार्यकर्ताले । जब अभिभावक नै गुण्डा, आतंककारी र अराजक छ भने सन्तान त्यसैको दिसामा नहिँड्ने कुरा भएन । भेरी घटना पनि त्यही नेतृत्वको प्रेरणा हो ।
उसो त आफू मरेर भए पनि विरामी बचाइरहेका ती चिकित्सकमाथि राज्यले पर्याप्त मात्रामा मास्क र पिपिईसमेत दिन सकेको छैन राज्यले । उनीहरुलाई भत्ताको कुरा त परै जाओस् मौखिक सहानुभूति दिन पनि सकिरहेको छैन । न उनीहरुको तलव भत्ता बढाइन्छ ? न अरु केही ? दिने भनेको भत्तामा पनि नेताको कमिसन चल्छ र माथि नै बाँडिचुँडी गरिन्छ । तै पनि उनीहरु खुरुखुरु काम गरिरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा उनीहरुमाथि हौसला बढाउने हो कि नेताको आडमा दाइ मर्यो भनेर निर्ममतापूर्वक कुट्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई ?
आज एक जना नेताको दाइ मरेछन् ? र उनले गएर स्वास्थ्यकर्मीलाई कुटे । त्यसो भए आज हजारौँ आमाबुबा, हजुरबुबा, हजुरआमा, दाजुभाइ दिदीबहिनी, कोरोनाको कारण अकालमा मर्नुभएको छ । के तिनीहरु सबैका आफन्त दाजुभाइ र दिदीबिहिनीले देशभरका अस्पतालमा तोडफोड गर्ने ? नर्स र डाक्टरको ज्यान लिने ? के सिकाउन खोजेका हुन् ती मान बहादुरले ?
कति सर्वसधारण भेन्टिलेटर र आइसियूमा अहिले छट्पटाइरहनु भएको छ । उसो भए ती नेताका दाइलाई बचाउन भेन्टिलेटर र आइसियूमा मृत्युसंग लडिरहेका सर्वसाधारणलाई फ्यात्त भुईमा फाली मार्नु पर्यो स्वास्थ्यकर्मीले ? यो कस्तो नियति भोग्दै छौँ हामीले ।
कोरोनाको दोश्रो लहर सुरु भएर यति धेरै नेपालीको ज्यान जाँदासमेत राज्यले खोप उपलब्ध गराउन सकेको छैन । अक्सिजन अभावमा आज हजारौँमा नेपाली जनताले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । भेन्टिलेटर र आइसियू वेड नभएर बाँच्नेहरु पनि लास बनिरेका छन् । विचरा ती स्वास्थ्यकर्मीकै बलबुताले गर्दा दशौँ हजारौँ नेपाली जनताको ज्यान जोगिएको छ ।
यस्तो स्थितिमा त ती नेताले उनीहरुको मनोबल उच्च बनाउने काम गर्नुपर्दथ्यो ती मुख्यमन्त्रीका मान्छेले ? उल्टै मुख्यमन्त्रीका मान्छे हुँ भन्दै सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै स्वास्थ्यकर्मीमाथि जाइलाग्ने ? यस्तालाई मिल्छ भने मृत्यु दण्ड नै दिनुपर्दछ । तर विडम्बना यस्ता अपराधीलाई तह लगाउन हामीसंग पर्याप्त कानुन छैन ।
घटना लगत्तै प्रहरीले मानबहादुर रावत, र मृतकका दुई छोरालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ। घटनाको छानबिन गर्न जिल्लला प्रशासन कार्यालय बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर विष्ट नेतृत्वमा ७ सदस्यीय समिति निर्माण गरिएको छ । यो समितिले आजैदेखि काम गर्न थालोस् र दोषीलाई अधिकतम कारबाही हुनुपर्दछ । भेरी घटनापछि अब राज्यले हरेक अस्पतालमा चिकित्सकमाथि सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु पर्दछ । रकमान्तर गरेर भए पनि उनीहरुको तलव भत्ता बढ्नै पर्दछ ।
उसो त अन्य समयमा पनि मृत्युलाई कारण मानि बिभिन्न अस्पतालमाथि तोडफोड, आगजनी र चिकित्सकमाथि हातपात गर्ने नेपालमा संस्कार नै बनेको छ । यस्तो संस्कारले भोलिको दिनमा के होला ? यस्तै भइरह्यो र कुनै दिन देशभरका सम्पूर्ण अस्पताल बन्द गर्ने र विरामी नहेर्ने स्थिति आयो भने के होला देशको हालत ? अर्कोतर्फ चिकित्सकहरुले पनि विरामीको संंवेदनशिलतामा ध्यान दिनु पर्दछ । कोरोनाको यस डरलाग्दो स्थितिमा कत्ति नडराई जनता बचाउन अहोरात्र खटिएका, हामी सबैका भगवान् देशभरका स्वास्थ्यर्कीप्रति हृदयदेखि उच्च सम्मान छ ।